DTG → Direct to Garment fanontana dia fomba mivantana maoderina
Fanontana DTG - fomba maoderina amin'ny fanaingoana mivantana
Fanontana DTG na "Direct To Garment" dia fomba maoderina firavaka mivantana ny lamba sy akanjo. Ny teknikan'ny DTG dia ahafahanao mampiditra sary amin'ny lamba landihazo na landihazo miaraka amina elastane / viscose. Namboarina tamin'ny fampiasana mpanonta manokana ny sary. Ny fitaovana ananantsika ao amin'ny vatan'ny masininay no maodely mpanonta farany Rahalahy GTXpro Bulkizay, misaotra ireo lohan'ny indostria, dia manonta haingana ireo fitaovana ireo. Ny fanontana amin'ny teknikan'ny DTG dia ahafahana manao fandikana loko tonga lafatra miaraka amin'ny tetezamita loko. Ny fanontana dia azo atao raha tsy mila manomana tetikasa avy amin'ny singany iray monja.
Fanontana sary amin'ny T-shirt mampiasa ny fomba DTG
Fanontam-pirinty mivantana DTG
Fahafahana betsaka amin'ny fanontana DTG
DTG pirinty amin'ny T-shirt ekipa mpilatsaka an-tsitrapo
Ny fanarahana ny tolo-kevitr'ireo mpanamboatra dia ahafahantsika mankafy ny vokatry ny tetikasanay mandritra ny fotoana maharitra. Noho ny fanampian'ny ekipanay dia azonao atao ny manamboatra ny fanaingoana ary afaka misafidy ireo vokatra mety indrindra eto aminay fivarotana.
Fanontana DTGfanontana amin'ny akanjoDTG amin'ny kitapoDTG moragadget miaraka amin'ny pirintyT-shirt misy pirintyfanontana mivantanafanontana sary sy soratrapirinty logo an'ny orinasapirinty amin'ny akanjo bafanontana amin'ny T-shirtfanontana amin'ny T-shirt ho an'ny hetsikapirinty amin'ny akanjofanontana amin'ny akanjo amin'ny vidiny ambanyfanontana amin'ny T-shirtfanontana amin'ny kitapofanontana avy amin'ny sombin-javatra irayfanontana fanandramanafanontana saryloka ho an'ny fifaninananaakanjo misy pirinty ho an'ny mpiasafanomezana ho an'ny renibenyfanomezana ho an'i dadabefanomezana ho an'ny vehivavyfanomezana ho an'i Nenyfanomezana ho an'ny lehilahyfanomezana ho an'ny namanafanomezana ho an'ny namanafanomezana ho an'ny rahavavyfanomezana ho an'i dadafanomezana krismasyfanomezana tsingerintaonafanomezana fitsingerenan'ny andro nahaterahanafanomezana ho an'ny mpiasafanomezana manokanafanomezana ho an'ny fialantsasatrafanomezana manokanafanontana mora vidypirinty mora vidyfanontana logo maharitrapirinty manokana amin'ny T-shirtpirinty amin'ny akanjo
5 / 5 ( 6 vato )